Abalungisa izinwele, Izinsizakalo Zobuhle, Isithombe Sezeluleko: UBeauty Saloon Messina
Indawo yokwenza izinwele, Izinsizakalo Zobuhle kanye Nokubonisana Ngezithombe
Lapho i-Wellness nobuhle buhambisana khona sibonga onobuhle bethu abaqeqeshiwe kanye nochwepheshe bezinwele zezinwele.
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-5)
UBeauty Saloon kanye Isaluni ijuba abalungisa izinwele ed beauticians bakunakekela nsuku zonke bekutotosa ngabaningi zokwelapha ubuhle e zezinwele ofanelana.
Abalungisi bezinwele, Abalungisa izinwele nabasebenza ngobuhle eMessina: isalon enikeza ukukhanya okukhulu ebuhleni bakho
Un indawo yokwenza izinwele futhi okunikeza okunembile Izinsizakalo zobuhle ukuthuthukisa ubuhle bemvelo lekhasimende ngalinye lethu. Lapha zenziwa nsuku zonke Ukusikeka okwenzelwe kuhloswe ngalo ukuthuthukisa lonke uhlobo lwesici nobuntu. Abanikazi, besekelwa ngabasebenzi bezithombe zangempela, bahlala njalo bevuselelwa ezindabeni zakamuva kulo mkhakha Izinwele noBuhle ukukuqinisekisa ukusikeka kwakamuva kwemfashini, zezinwele akakaze banal futhi abaningi izixazululo zobuhle ezintsha kuzo zonke izidingo zakho zobuhle.
Abalungisa izinwele abazokwenza izinwele zakho zinganqandeki futhi kube nesaluni yobuhle ekuthakazelisa nsuku zonke
At indawo yokwenza izinwele UBeauty Saloon kunezindlela zokwelashwa eziningi kanye nezinsizakalo ongazicela: ukusikeka okunemfashini, folds elicwengekile nenhle, imibala yemvelo, ukuhlela kabusha amaski, izandiso, omama, umbala ngaphandle kwe-ammonia, ukuskena, unomphela, ukwelashwa kwezinwele nokunye okuningi. Kusetshenziswa kuphela imikhiqizo ye-e izimonyo yemikhiqizo emihle kakhulu, njalo ehlose ukunakekelwa kwesikhumba e capelli, futhi ukukhumbula ikhwalithi konkulunkulu njalo imiphumela yobungcweti. Futhi ohlangothini lwe- zokwelapha ubuhle, uzothola ulwazi nekhono kuyo yonke imisebenzi eyenziwayo, futhi ngenxa yokusetshenziswa kwe- imikhiqizo yobuhle e izimonyo akhethelwe ikhwalithi nokusebenza kwawo.
Imisebenzi Yezobuhle Nokubonisana Ngezithombe: sinakekela ukubukeka kwakho kuma-degree angama-360
Ngubani oyifunayo ukubonisana ngesithombe ukuguqula ukubukeka kwakho noma ukuvuselela umbala wakho, ungaxhumana ngokuqiniseka nabachwepheshe bethu I-Stylist yezinwele. Sizojabula ukukuqondisa ekukhetheni imishanguzo evumelana kangcono nezidingo zakho. Futhi, ngenxa yobukhona be- onobuhle abanekhono futhi ivuselelwa njalo, ungakhetha kokuningi zokwelapha ubuhle ozinikele kuwe. Phakathi kwalokhu: izandla nezinyawo ezingapheli, ukugcoba, i-pedicure yokwelapha, i-pedicure yobuhle, amadevu namashiya.
I-salon yethu yokulungisa izinwele isekelwe emandleni amathathu: i-Wellness, i-Beauty ne-Relax
Abathanda impilo enhle kakhulu, bonke opharetha besikhungo sethu ku Izinwele ed beauticians benza ukunakekelwa komuntu siqu kube umsebenzi wabo wobuchwepheshe. Ufuna entsha Imi okwakho capelli noma okusha ukucabanga okunemibala izinwele zakho, ikwekhanda ehambisana noma onkulunkulu ukwelashwa kabusha, eyethu abalungisa izinwele bayakwazi ukufeza izifiso zakho. Nokwethu beauticians bazokutotosa ngezethu ukugcoba e pedicure. Labo abafuna ukuzitika ngekhefu lokuphumula nobuhle bazothola konke abakufunayo esalon yethu.
Ikheli: UVia Fata Morgana, oneminyaka engu-7
Umakhala ekhukhwini: 331 4350674
Isixhumanisi Sokubonisa: www.muzime.web.com
Inombolo ye-VAT: 03628700837